Inobungozi kangakanani iNqaba yakho yeTekhnoloji? | Martech Zone
Inobungozi kangakanani iNqaba yakho yeTekhnoloji?
NgeCawa, ngoSeptemba 23, 2018 NgeCawa, ngoSeptemba 23, 2018 ULindsay Tjepkema
Inokuba yintoni ifuthe ukuba inqaba yakho yetekhnoloji iye yawa emhlabeni? Ingumbono ondibethileyo ngeMigqibelo embalwa edlulileyo njengoko abantwana bam bebedlala iJenga ngelixa bendisebenza kumboniso omtsha malunga nokuba kutheni abathengisi kufuneka baphinde bacinge ngobugcisa babo. Undibethile ukuba iziteki zobuchwephesha kunye neenqaba zeJenga eneneni zinokufana. UJenga, ewe, udlalwa ngokufumba iibhloko zomthi de yonke loo nto ifike ibhukuqeke phantsi. Ngomaleko ngamnye omtsha ongezelelweyo, isiseko siba buthathaka… kwaye ekugqibeleni inqaba iye iwe phantsi. Ngelishwa, ukugcinwa kwetekhnoloji kusengozini ngendlela efanayo. Njengoko iileya zongezwa, inqaba iya isiba buthathaka kwaye yazise umngcipheko ngakumbi nangakumbi.
Kutheni le nto uthabatheka bubuchwephesha obungaphezulu?
Ewe, le ntetho ndiyikhankanyileyo ngasentla bendisebenza kuyo- kutshanje bendonwabile ukuyibeka kwi Ivenkile.Org inkomfa eLas Vegas. Ivakala kwakhona ngabantu ababekho, ndiyakholelwa, kuba ibiyinto eyahluke mpela kwinto eshunyayelwa ngabathengisi nabathengisi abaninzi namhlanje. Emva kwayo yonke loo nto, umhlaba wethu ugcwele imiyalezo malunga nokuba kutheni kwaye kutheni sidinga itekhnoloji ENGAKUMBI. Ngokuqinisekileyo hayi ngaphantsi. Kwaye ubuchwephesha, hayi thina njengabathengisi bokuyila kunye nobuchule, sisisombululo kwiimfuno ezikhulayo ezivela kumashishini ethu kunye nokwandisa okulindelweyo kubathengi.
Njengoko sonke siqhubeka sihlaselwa ngamanani emiyalezo ekhwaza kubathengisi ukuba bakhule kwizitaki zethu zobuchwephesha, ndiyakucela ukuba uthathe umzuzwana kwaye ucinge ngayo kwaye ucelomngeni. Olu luvo lokuba ubuchwephesha ngakumbi xa sibongeza kwizitokhwe zethu, kokukhona siya kuba ngcono, ayilunganga. Ngapha koko, inyani ichasene ngqo. Ukwahluka kakhulu kwe-hodgepodge yezixhobo, isoftware, usetyenziso, kunye neenkqubo ezahlukeneyo, ukungasebenzi kakuhle, indleko kunye nomngcipheko owazisa kumbutho wakho.
Abanye abathengisi bajonga indawo yemartech kwaye bafuna ukusebenzisa uninzi lwezi zixhobo njengoko becinga ukuba banako okanye banako. (Umthombo: Martech Namhlanje)
Ngaba uyazi ukuba uninzi lwabarhwebi lusebenzisa ngaphezulu kwesigama seshumi elinetekhnoloji? Ngapha koko, iipesenti ezingama-63 zabaphathi bezentengiso bathi iqela labo lisebenzisa indawo ethile phakathi kweziqwenga zetekhnoloji ezingama-20 ukuya kwezi-XNUMX, ngokwe-Conductor
umthombo: Abaphetheyo abangama-500 beNtengiso baTyhila iSicwangciso sabo se-2018, uMqhubi
Kukho ubhubhane oxhaphakileyo wokungena ngaphakathi kwintengiso njengesibetho. "IShadow IT" kunye nemingcipheko enxulumene nayo ayinakuphinda ihoywe.
I-Shadow IT kunye neengozi ezithweleyo
Imicimbi ethile ijongene nezithunzi xa usetyenziso okanye izixhobo ezintsha zivela kwiziseko zophuhliso ngaphandle kokubandakanyeka kunye nesikhokelo esivela kwi-IT. Le yi-Shadow IT. Ngaba uyalazi igama? Ibhekisa nje kubuchwephesha obuziswa kumbutho ngaphandle kokubandakanyeka kwe-IT.
I-Shadow IT inokuzisa umngcipheko wokhuseleko lombutho, ukungangqinelani kokuthotyelwa, ukumiswa kunye nokudibana okungahambi kakuhle, nokunye okuninzi. Kwaye, enyanisweni, nasiphi na isoftware sinokuba yi-Shadow IT… nezona zixhobo zikhuselekileyo, zithathwa njengezona zixhobo kunye nezisombululo. Kuba ayisiyiyo malunga netekhnoloji, ngokwayo. Imalunga nenyani yokuba i-IT ayazi ukuba ingenisiwe kumbutho. Kwaye, ke, ayinakuba yinto esebenzayo okanye ekhawulezileyo ukuphendula xa itekhnoloji ibandakanyeka ekophuleni, ekuqhekekeni, okanye komnye umba- ngenxa yokuba bengazi ukuba iphakathi kweendonga zenkampani. Abakwazi ukubeka iliso kwinto abangaziyo ukuba ikhona.
Ezinye zezona zicelo zixhaphakileyo ezifakwe ngaphandle kwemvume ye-IT zibandakanya imveliso ebonakala ingenabungozi kunye neenkqubo zokusebenza.
Ingcebiso yePro: Ezi zixhobo azikho "ezimbi". Ngapha koko, zikhuselekile kwaye zikhuselekile. Khumbula ukuba isoftware eyaziwayo ngokubanzi kunye namaqonga anokuba yi-Shadow IT. Ingxaki ilele kubuchwephesha, ngokwayo, kodwa endaweni yokungabikho kokubandakanyeka yi-IT. Ukuba abazi ukuba ezi okanye enye itekhnoloji izisiwe kumbutho, abanakukwazi ukulawula okanye ukujonga imeko ezinobungozi. Naliphi na iteknoloji entsha, nangona incinci, kufuneka ibe kwi-radar ye-IT.
Kodwa makhe sijonge ezona zizathu ziphambili zokuba i-Shadow IT kunye neeteki ezinkulu zobugcisa zikubeka wena neqela lakho emngciphekweni omkhulu nasemngciphekweni.
Ukungasebenzi kakuhle kunye nokungafuneki emsebenzini - Iziqwenga ezingaphezulu zetekhnoloji- kunye nokuveliswa kweapps, iinkqubo zangaphakathi zengxoxo, kunye nezisombululo "zenqaku" elinye-kuthetha ukuba ixesha elininzi liyafuneka ukulawula zonke. Iitekhnoloji ezininzi kunye nezixhobo zenza ukuba abathengisi basebenze njengabaphathi bokuhlanganiswa kobuchwephesha, abaququzeleli beenkcukacha, okanye abalawuli befayile ye-CSV. Oku kususa ixesha elinokuthi lichithwe kwaye kufanele lichithwe endaweni yokuyila, izinto ezinobuchule zentengiso. Cinga ngako… mangaphi amaqonga owasebenzisayo mihla le ukwenza umsebenzi wakho? Uchitha ixesha elingakanani usebenza nezi zixhobo ngokuchaseneyo nesicwangciso sokuqhuba, ukwenza umxholo onyanzelisayo, okanye ukusebenzisana nabantu osebenza nabo? Iipesenti ezingama-82 zeentengiso kunye nezentengiso zilahleka ukuya kuthi ga kwiyure ngemini ukutshintsha phakathi kwezixhobo zentengiso Yeyiphi inkcukacha-manani eyoyikisayo xa ucinga ukuba oku kulingana neeyure ezi-5 veki nganye. Iiyure ezingama-20 ngenyanga. Iiyure ezingama-260 ngonyaka. Yonke inkcitho yokulawula ubuchwephesha.
Iindleko ezingalindelekanga - Umthengisi ophakathi usebenzisa izixhobo ezingaphezulu kwesithandathu zetekhnoloji ukwenza imisebenzi yabo. Kwaye abaphathi babo basebenzisa ezinye iideshibhodi ezimbini ukuya kwezintlanu kunye nezixhobo zokuxela ukuqonda indlela amaqela abo anika ngayo ingxelo. Cinga ngendlela iindleko zezi zixhobo ezinokongeza ngayo (kwaye ingaphezulu nje kwevolumu yodwa):
Ukufunwa kwakhonaUninzi lwezi zixhobo azifuneki, oko kuthetha ukuba sihlawula izixhobo ezininzi ezenza izinto ezifanayo.
Ukukhutshwa: Rhoqo, sizisa itekhnoloji ngenjongo ethile kwaye, ekuhambeni kwexesha, siqhubela phambili ukusuka kuloo mfuno… kodwa siyigcina itekhnoloji, nangona kunjalo, kwaye siqhubeke nokuzenzela iindleko zayo.
Umsantsa wokwamkelwaIimpawu ezingaphezulu ezinikezelwa liqonga okanye iqhekeza lobuchwephesha, KUNCINANE kunokwenzeka ukuba ubamkele bonke. Kukho nje izinto ezininzi kunye nemisebenzi kunokuba iqela eliqhelekileyo linokufunda, lamkele, kwaye liphumeze kwiinkqubo zalo. Ke, ngelixa sithenga zonke iintsimbi kunye neempempe, siphela sisebenzisa ipesenti encinci yeempawu ezisisiseko… kodwa sisahlawula yonke ipakethe.
Idatha yabucala / ukhuseleko kunye nomngcipheko wombutho- Itekhnoloji ethe kratya ethe yangeniswa kumbutho-ngakumbi leyo eyi-Shadow IT-eyona ngozi iyaziswa nayo:
Uhlaselo lwe-cyber. Ngokuka-Gartner, ngo-2020, isinye kwisithathu se-cyberattacks ngokuchasene namashishini siya kufezekiswa ngokusetyenziswa kwe-Shadow IT.
Ukophulwa kwedatha. Ukwaphulwa kwedatha kuxabisa amashishini aqhelekileyo ayi- $ 3.8 yezigidi.
Iqela lakho le-IT lineenkqubo, iinkqubo, iinkqubo, kunye neendlela zokhuselo ezikhoyo ukunciphisa umngcipheko. Kodwa abanakho ukusebenza ngokukhawuleza okanye baphendule ngokukhawuleza xa kuvela ingozi ejikeleze itekhnoloji abangaziyo ukuba ikhona ngaphakathi kombutho.
Ke, senza ntoni?
Sifuna ingqondo yokuhlangana, eya kuguqula indlela esijonga ngayo ukuphunyezwa kobuchwephesha kwaye isuse kwingqondo "yokwandisa" siye kwenye "yomanyano." Lixesha lokuba ubuyele kwiziseko.
Singasika njani, singazivumelanisa phi izinto ezingafunekiyo, kwaye singaziphelisa njani izixhobo ezingafunekiyo?
Kukho amanyathelo ambalwa onokuwathatha ukuze uqalise.
Qala ngeenjongo zakho Buyela kwiziseko zokuThengisa 101. tyhala itekhnoloji yakho ecaleni kwaye ucinge kuphela malunga neqela lakho ekufuneka likwenzile ukunceda ishishini lifezekise iinjongo zalo. Zithini iinjongo zakho zokuthengisa? Rhoqo, siqala ngetekhnoloji kwaye sibuyele umva apho siye kubuchule bokuthengisa obenza imephu ngqo kubuchwephesha bethu. Oku kucinga kubuya umva. Cinga kuqala malunga nokuba zithini iinjongo zakho. Itekhnoloji iza kuza kamva ukuxhasa isicwangciso sakho.
Yenza uphicotho lwakho lobuchwephesha- Zibuze le mibuzo malunga nesitaki sakho sobuchwephesha KANYE nendlela iqela lakho elinxibelelana ngayo:
Ngaba uyenza ngokufanelekileyo isicwangciso esiliqili sentengiso? Zingaphi izixhobo ezithathayo?
Uchitha ixesha elingakanani ukulawula iteknoloji?
Uchitha imali engakanani kwisitokhwe sakho sobuchwephesha?
Ngaba amalungu eqela lakho achitha ixesha lawo elawula itekhnoloji? Okanye ngaba zisebenzisa izixhobo ukuze zibe nobuchule ngakumbi, ukuthengisa okuqinisekileyo?
Ngaba itekhnoloji yakho iyakusebenzela okanye uyasebenzela itekhnoloji yakho?
Funa iTekhnoloji eyiyo yesicwangciso sakho- Kuphela emva kokuba uzibekele iinjongo zakho, kuvavanye isitaki sakho sobuchwephesha, kunye nendlela iqela lakho elinxibelelana ngayo nayo xa kufanelekile ukuba uqale ngokujonga ukuba yeyiphi itekhnoloji oyifunayo ukuzisa isicwangciso sakho ebomini. Khumbula, ubuchwephesha bakho kufuneka bongeze iinzame zakho kunye neqela lakho. Hayi enye indlela ejikeleze. Ewe, kunjalo, sinezindululo malunga nokuba ungayikhetha njani itekhnoloji efanelekileyo, kodwa andizukujika eli nqaku libe yintengiso yokuthengisa. Elona ngcebiso ndiza kunika lona yile:
Cinga ngokudibanisa isitaki sakho sibe ziingceba ezimbalwa kangangoko kunokwenzeka.
Qonda ukuba itekhnoloji yakho inokukunceda njani ukuba wenze isicwangciso se-omnichannel.
Buza ukuba ubuchwephesha bakho buya kuyidibanisa njani idatha yakho kwindawo yogcino lwendawo ukuze ufumane umbono opheleleyo, omanyeneyo womthengi ngamnye KUNYE nokufumana izinto ezinobuchule njenge-AI kunye nokufunda ngomatshini.
Iqabane ne-IT -Ukuba unesicwangciso sakho kwaye uchonge itekhnoloji ocinga ukuba iya kukunceda uyiphumeze ngokufanelekileyo, sebenza ne-IT ukuyivelisa kwaye uyenze ukuba iphunyezwe. Yakhani ubudlelwane obuqinileyo ne-IT ukuze kusekwe inkqubo ehlengahlengisiweyo eninceda nina nobabini. Xa usebenza kunye njengeqela, uya kufumana eyona tech ikhuselekileyo neyona ikhuselekileyo ekhusela inkampani kunye nedatha yakho yabathengi.
Izixhobo zeTech kunye nezisombululo aziyongxaki. Yinyani yokuba sibafumbe bonke ndawonye kwizitaki zetekhnoloji yaseFrankensteined. Itekhnoloji iyinjongo, hayi iindlela. Nantso ingxaki.
Ngapha koko, iinkqubo esizisebenzisayo (kunye nam yonke imihla) zikhuselekile kwaye azinabungozi. Umba uphakama xa besetyenziswa kwaye i-IT ingazi, xa oomatshini beqala ukukuphatha endaweni yenye indlela ejikeleze, kwaye kwezo meko xa bebeka umngcipheko wokukhuseleka kwe-cyber.
Ekugqibeleni, olona khetho lulolona lubeka yonke into esiyifunayo-inye, iqonga lokuthengisa elimanyeneyo.
Njengendawo engenakutshabalalisa, ezinzileyo (ngokuqinisekileyo ayisiyiJenga tower yeziqwenga ezingenakuqikelelwa), ubuhle beqonga lokuthengisa elimanyeneyo endaweni yeqela lezixhobo ezidityaniswe zihlanganisiwe kucacile. Lixesha lokuba uphinde ucinge ngestack tech.
Bamba i-PDF yakho ehambelanayo apho sichaza khona nge-Shadow IT, kwaye sikunike izinto onokuzithatha ukuze uphelise le micimbi! Nxibelelana nam kwaye undazise ngemicimbi oyibonileyo okanye onamava kuyo ngobuchwephesha obuninzi, okanye ngolwazi oluthe kratya malunga nendlela yokudibanisa yonke imizamo yakho yentengiso yedijithali kunye neqonga lonke elenzelwe ngokukodwa abathengisi.
Khuphela obuphi ubungozi ekulaleni kwisitokhwe sakho seTekhnoloji?
tags: umqhubiEmarsysitItekhnoloji yentengiso yokuma komhlabamartechisitaki seMartechingoziukhuselekoisithunziinqaba yetekhnolojiUkukhetha umthengisi
ULindsay Tjepkema yi-CEO kunye nomseki-mbumba weCasted, iqonga lokuqala kunye nelokuthengisa kuphela elakhelwe iipodcast ezinophawu. Ngaphezulu kweminyaka eli-15 yamava kuthengiso lwe-B2B, kubandakanya nokuqhuba iarhente yakhe yokubonisana, uyinkokeli enamandla enamandla okuphumelela ekwakheni impumelelo kunye nokukhula kwamaqela entengiso kwinqanaba lasekhaya nakwilizwe liphela. Emva kokusungula i-podcast enophawu lwenkampani yentengiso yehlabathi, uLindsay waqonda ukuthanda kwakhe iincoko zokwenyani. Oku kukhokelele ekusekeni i-Casted ukunceda abathengisi ukuba bavule ngokupheleleyo umxholo wabo ngokusebenzisa amandla e-podcasting. Inkampani sele ifumene ukurhuqa ngokukhawuleza phakathi kweempawu ezinqwenela ukwenza unxibelelwano olukhulu nabaphulaphuli bazo ngencoko eyiyo.
Kuthatha ixesha elingakanani ukujonga iZiphumo zoPhendlo lukaGoogle?
Imveliso: Ukudityaniswa kweMxholo weMveliso kunye noLawulo lweeFidi